Okraina: Fampihenana ny Vokadratsy sy Fampiharana ny Lalàna, Fizaràna Faha-2 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 11:49 GMT
Tamin'ny Oktobra farany teo, nanoratra mikasika ny fiezahany hampianatra vondrona manampahefana tao amin'ny polisy ao Kyiv momba ny fandaharanasa mikasika ny fampihenana ny vokadratsy i mazay, Okrainiana iray blaogera izay manoratra ho an'ny depo3p, blaogy iombonana LJ vao natomboka. Napoitra tao amin'ny Global Voices sy ny Rising Voices tany am-piandohan'ity volana ity ny fandikanteny momba ny tantaran'i mazay.
Na toa tsy dia liana aza tamin'ity fomba fijery mbola-tsy-malaza mikasika ny fandraisana an-tànana ny zava-mahadomelina ity na tamin'ny fahazoany kapaoty maimaim-poana avy tamin'ireo mpikatroka aza ireo polisy nihaino ilay famelabelaran-kevitra, raha tarafina amin’‘ity lahatsoratra fanarahana (teny Rosiàna) nosoratan'i mazay ity, nisy vokany tsara ihany ilay resaka nony farany.
Ao anatin'ireo andinintsoratra voalohany, mamaritra ny fitsidihana vao haingana nataony tany amin'ny efitrano fonenan'ireo namany andevozin'ny zava-mahadomelina i mazay, izay nitantara taminy ny fihaonany tamin'ny polisy efa ho iray volana lasa izay taorian'ilay famelabelarana mikasika ny fampihenana ny vokadratsy nataon'i mazay:
[…] ”Mipetraha tsara!” Na izany aza, nanomboka nisava ahy izy ireo. Voalohany, ny paosy, toy ny hoe, avoahy daholo ny any aminao any… Avy eo nanokatra ny kitapom-batsiko izy ireo, ary nisy vola teo amin'ny roa arivo hryvnias [eo amin'ny $200 eo] tao – ny ahy sy ny vola nangatahan'ny nenitoako homena ny reniko. Eny, tamin'ny fotoana nahitan'ireo polisy ilay vola dia hoy izy ireo, ”Goay! Avy taiza?” ary nilaza aho fa hoe tsy ahy io tompoko, tena miniana aho, […] ary avy eo tonga dia natomboka avy hatrany ny tsianjery maimbony: ”Andevon'ny zava-mahadomelina? Eo eh, asehoy ahy! Asehoy ahy ny tananao!” Mody adala aho, nahodinkodiko ny felatanako, ary [nidaroka ahy teo amin'ny ambavafoko izy]. Toy ny hoe, aza mody fanina eo, hitako amin'ny tarehinao fa mitsindrona ianao. Tena ao izany, hoy aho, […] hoentin'izy ireo any amin'ny biraon'ny polisy izahay izao, hisava anay manontolo, hahita ary tsy maintsy hahita, ary haka ny vola rehetra… […] Ary avy eo sokafany ny kitampom-batsiko ary manokatra poketra kely izay misy ireo karatra, taratasy, tapakila ary zavatra hafa izy. Dia avy eo navoakany ity…
Tamin'izany fotoana izany, namoaka karatra plastika tao am-paosiny ny mpitantara – karatra maha-mpandray anjara azy amin'ny fandaharanasa mikasika ny Fampihenana ny Vokadratsy. ”Fandaharanasa Monisipaly ho fisorohana ny VIH/SIDA.”
Tonga dia nitsamboatra ilay polisy!
- Inona ah, nga ianao voan'ny SIDA? hoy izy.
- Tsia, sefo, – Hoy aho, – fandaraharanasa izay hahafahanay mahazo kapaoty maimaimpoana ary otrikaina maro isan-karazana ity.
Tonga ny polisy iray hafa. Naka ilay karatra ary niteny tamin'ilay polisy iray hafa: ”Tsy tadidinao ve eh, nisy ilay lehilahy ohatry ny miloko mivolombatolalaka iny ny volony nanao famelabelarana tamintsika tamin'ilay andro iray iny? Mikasika ny sampandraharaha ara-tsosialy miasa miaraka amin'ireo andevozin'ny zava-mahadomelina, manome azy ireo tavim-panindronana madio, sy zavatra maro hafa mba hanakana azy ireo tsy hanaparitaka aretina be loatra.” Nanaiky ireo polisy ary nanontany ahy izy: ”Ka ahoana? Ianao izany iray amin'ireo, inona no iantsoanareo izany moa…?” Nanaiky aho, eny, mpilatsaka an-tsitrapo aho, mitety ny toerana fonenan'ireo andevozin'ny zava-mahadomelina, manangona tavim-panindronana efa nampiasaina, manakalo azy ireny amin'ny vaovao. Mandritra ny roa volana voalohany, mitsidika miaraka amin'ny mpiasa ara-tsosialy ianao, mianatra ny fandehanan'izany rehetra izany, ary avy eo manomboka mandeha irery mitsidika ny mpanjifa … manakalo tavim-panindronana, mizara vaovao – taratasy fanentanana, gazety isan-karazany, manasa azy ireo hanatrika fivoriana maro. ”Eny eh, fantatro izany,” hoy ilay polisy. Ary avy eo tsy nino ny zavatra henoko aho rehefa nilaza ny mpiara-miasa taminy izy: ”Eny ry zalà ah, avereno aminy ny volany dia avelao izy handeha.” Ary tamiko – tsy hino ity ianao! – hoy izy, Isao ilay vola, jereo raha ao daholo. […] Hoy aho taminy, Aaa, sefo ah, tsy maninona izany, tsy mila manisa. Toy ny hoe, tokony hatoky ny olona ianao… […]
Nipetraka teo aho, nitsiky moramora. Na inona na inona lazainao, any anatin'ny fanahiko any, toy ny lazain'izy ireo, tena nahafinaritra be fa ilay ”lehilahy ohatry ny miloko mivolombatolalaka iny ny volony izay nanao famelabelarana” no mpanoratra ireny andàlana ireny, izay vao avy nandalo tato amin'ity efitrano fonenana ity, efa ho iray minitra eo izay. […]